China 50FT telescopic Ogologo iru Telescopic Water Rescue osisi ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ya | Lanbao
50FT telescopic Ogologo Ogologo Telescopic Water Rescue Pol
Multifunctional mmiri nnapụta mmiri telescopic mkpanaka nwere ike iji mee ihe maka nzọpụta oké osimiri, nnapụta anụmanụ, nnapụta ide mmiri, nnapụta dị elu, wdg. Na mkpọchi nchekwa, enwere ike gbanwee ogologo nke nnapụta nnapụta na-agbanwe agbanwe, ọ nwere ike ịgbatị na-akpaghị aka mgbe ọ na-adọta iji hụ nchekwa .
Mgbapụta Telescopic na-eme ka nnapụta dị mma ma nwee ntụkwasị obi, nke ikuku na oke osimiri anaghị emetụta, iji dozie ndị merụrụ ahụ ma zere mmerụ ahụ nke abụọ. Anyị na-akwado nhazigharị nha, ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ihe achọrọ maka nha ma ọ bụ ngwa, biko kpọtụrụ ndị ahịa.
Aha 50FT telescopic Ogologo Ogologo Telescopic Water Rescue Pol
Nke gara aga: 25Ft telescopic nnapụta osisi na kpochidoro Telescopic pole manufatur
Osote: 100% Carbon fiber Telescopic Water Rescue Pol
Yi Telescopic faiba glaasi okporo / Now Ma ...
20 Ft Carbon Fiber Telescopic osisi N'ihi Solar Cl ...
Carbon eriri tubes dị iche iche modulus